Madaxweynaha Masar Dr Maxamed Mursi oo la inqilaabay | Salaan Media
Madaxweynaha Masar Dr Maxamed Mursi oo la inqilaabay
Bayaan oo soo saaray wasiirka difaaca Masar Janaraal Cabdi Fatax Al-Sisi ayaa sheegay in uu madaxweyne Dr Maxamed Mursi mansabkiisa Madaxweynenimo laga wareejiye oo xunkunka si ku meel gaadh ah loogu wareejiyey Qaadiga weyn ee Maxkamada sare ee Masar. Inqilaabkan ayaa imanaya mar ay saaxada weyn ee caanka ah ee Taxriir ay maalimihii lasoo dhaafay mudaaharaadyo waawayn oo lagaga soo hor jeeda xukunka Ikhwaan Muslimiinka ee uu Madaxda ka yahay Dr Morsi oo lagu doortay Doorashayinkii ka dhacay wadankaa kal hore; Dhanka kalena saaxad kale oo lagu magacaabana Nasr City ay ka socdeen Mudaaharaadyo Taageeraya Madaxweyne Mursi.
General Abdi Fatah Al-Sisi
Dr Maxamed Morsi ayaa shalay dhaleeceeyey Cidanka Xooga Masar oo ku eedeeyey inuu labad dhinac ee Mucaaradka iyo Muxaafadka uu u kala eexanayo; Markii uu Janaraalka Ciidanka Al-Sisi uu u qabtay dhinacyada is hayya 48 sacadood inay heshiis galaan oo xukuumad labad daraf ka dhexeeya (Coalition) ay samayaan.
Intii laga tuuray Xukunka Madaxweynihii mudada dheer haya ee Xusni Mubaarak; ayaa wadanka Masar uu ku jiray marxalad aad u xasaasi ah, iyada oo lagu jiray sidii loo samaysan lahaa Maamul cadaalad iyo dumuqraadiyad ku shaqeeya, iyada oo tirada dadka saboolnimada ku nool ay aad u saraysa; shaqo la’aanta ku badantahay dhalinyarada wadankaasi. Musuqmaasuguna ka yahay dhibaato wayn iyada oo laga soo waramayo in uu dhaqaaluhu aad u liito sababta oo ah Masar oo dhaqaale badan ka soo gali jiray Dalxiiska oo sii yaraaday sababa la xidhiidha amniga awgeed.
Hadaba waxaa imika taala su’aasha ah, Ma ku saxsanyahay Militariga wadankaas Masar in uu Dr Maxamed Mursi oo doorasho ku yimid inay jagada ka tuuraan isaga oo mudadii madaxwaynanimada Sanad qudha jagadeeda uu hayey? Ma dhici kartaa dadkii u codeeyey Dr Morsi in ay iyaguna kacaan kale sameeyaan marka la doorto Madaxweyne aan la mabda’ ahayn?
Wixii xaaladan siyaasadeed ee uu Dalka Masar Marayo kala soco halkan.